Article 8 formalitie - Englisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: article 8 formalities for temporary use (Englisch - Burmesisch)
a file could not be created at the location specified for temporary files
sets the folder for temporary storage. files will appear here during the course of running gimp. most files will disappear when gimp exits, but some files are likely to remain, so it is best if this folder not be one that is shared by other users.
ဖိုင်တွဲကို ယာယီ သိုလှောင်မှုအတွက် သတ်မှတ်ပါ။ gimp ကို လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဖိုင်များဟာ ဒီမှာ ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဖိုင်အများစုဟာ gimp ထွက်ခွါတဲ့အခါ ပျောက်သွားမယ်၊ ဒါပေမဲ့ တချို့ ဖိုင်များ ကျန်ခဲနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီဖိုင်တွဲဟာ အခြား သုံးစွဲသူများနဲ့ ဝေမျှမထားတား အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်။
မတ်လ၏ ဒုတိယ တဝက်တွင် ပြင်သစ် အလုပ်သမား4သန်း ယာယီ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် လျောက်ထားခဲ့ကြပြီး ဗြိတိန် အလုပ်သမား 1 သန်းက အားလုံးလွှမ်းခြုံသော အကြွေး အစီအစဉ်တွင် လျောက်ထားခဲ့ကြသည်။ ဂျာမဏီနိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီ သန်းဝက်ခန့်က ကာဇာဘိတ် (kurzarbeit) ဟု သိသော အစိုးရက စိုက်ထုတ်ပေးသည့် အချိန်တို အလုပ်အစီအစဉ်များသို့ သူတို့၏ အလုပ်သမားများကို စေလွှတ်ခဲ့ကြသည်။
me (Spanisch>Holländisch)przeciwświądowe (Polnisch>Dänisch)लड़के मैदान में है (Hindi>Englisch)ducebant (Latein>Russisch)irtisanomisilmoitus (Finnisch>Englisch)cilio (Spanisch>Englisch)basa koi (Bengali>Englisch)the best place ever (Englisch>Italienisch)abundance (Englisch>Portugiesisch)e haere ana taua ki te kai ranui ki tenei morena (Maori>Italienisch)hometown (Englisch>Griechisch)pont (Englisch>Russisch)nilgiri (Englisch>Lettisch)docti (Latein>Russisch)una domus non alit duos canes (Latein>Holländisch)schoolchild (Englisch>Bulgarisch)हिंदी सेक्सी video videobf (Hindi>Englisch)seorang yang muflis (Malaysisch>Englisch)observance (Dänisch>Xhosa)usaha sama (Malaysisch>Arabisch)dulce est periculum (Latein>Spanisch)trabocchetto (Italienisch>Spanisch)entry into force (Englisch>Slowenisch)letters (Englisch>Hindi)stück (Deutsch>Rumänisch)